ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ် အရက်သောက်လည်း သွေးတိုးအန္တရာယ်ပိုများစေနိုင်တယ် - Hello Sayarwon
Yun Sandi Nan Mon မှ ရေးသားသည်။ 18/10/2021 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်ပဲဆိုဆို တစ်ခွက်တစ်ဖလားပဲဆိုဆို အရက်သောက်တာကသောက်တာပါပဲ။ ဘီယာက အရက်မဟုတ်ဘူးလို့တော့ ကပ်မငြင်းကြပါနဲ့ဦး။ ဝီစကီ၊ ဘီယာ၊ ဗော့ကာ၊ ဝိုင် စတာတွေအားလုံး အယ်လ်ကိုဟော ချင်းတူတူပါပဲ။
ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်သောက်ရင် နှလုံးကျန်းမာတယ်၊သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းတယ်ဆိုပြီး ယူဆကြပေမယ့် သုတေသနအသစ်မှာတော့ ဒီပမာဏလောက်နဲ့တင်သွေးတိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြလာပါတယ်။
ဒီသုတေသနကိုAmerican College of Cardiology ရဲ့ ၆၈ ကြိမ်မြောက် နှစ်စဉ်အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြခဲ့တာပါ။ သုတေသနမှ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အမေရိကန်လူမျိုး ၁၇၀၅၉ ဦးကိုသောက်တတ်တဲ့အလေ့အထနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တမ်းကောက်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကို သုတေသနအဖွဲ့ကလေ့လာစောင့်ကြည့်တဲ့အခါ တစ်ပတ်ကို အယ်လ်ကိုဟော ၇ ခွက်ကနေ ၁၃ ခွက်သောက်တတ်တဲ့ ၁၇၀၀၀ ဦး မှာသွေးတိုးဖြစ်နိုင်ခြေ ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းပိုများတယ်လို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
တစ်ပတ်ကို ၁၄ ခွက်နဲ့အထက်သောက်တတ်သူတွေကတော့ အရက်မသောက်သူတွေထက်သွေးတိုးဖြစ်နိုင်ခြေ ၆၉ ရာခိုင်နှုန်းပိုများတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့သွေးပေါင်ချိန်ကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါသွေးတိုးအစောပိုင်းအဆင့်ဖြစ်တဲ့ အပေါ်သွေး 130–139 mm Hg နဲ့အောက်သွေး80–89 mm Hg တို့မှာရှိနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီရလဒ်တွေက အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီး အတူတူပဲဖြစ်နေတာတွေ့ရပြီး သုတေသီတွေအနေနဲ့ အသက်အရွယ်၊ လူမျိုးနဲ့ ဝင်ငွေ စတဲ့သွေးတိုးဖြစ်စေနိုင်တဲ့ တခြားအန္တရာယ်အချက်တွေကိုလည်း ထည့်တွက်ခဲ့ကြပါတယ်။
အမေရိကန်ကျန်းမာရေးအကြံပြုချက်တွေအရဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်သောက်တဲ့ပမာဏဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် တစ်နေ့တစ်ခွက်အထိဖြစ်ပြီး အမျိုးသားတွေအတွက်က တစ်နေ့နှစ်ခွက်အထိ သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။
အခုလေ့လာမှုမှာ ပါဝင်သူ ၁၇၀၀၀ကျော်အနက်ဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်သောက်တဲ့သူ ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းကသွေးတိုးအစောပိုင်းအဆင့် ၂ ကိုရောက်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေ နှစ်ဆပိုများတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အရင်တည်းက မှတ်ယူထားကြတာကဆေးဖြစ်ဝါးဖြစ်လောက်သောက်ရင် ကျန်းမာရေးအတွက်ကောင်းတယ်၊ များများသောက်မှ ကျန်းမာရေးထိမယ်လို့ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီသုတေသနအရ အနည်းအကျဉ်းသောက်လည်းရေရှည်ဆိုသွေးတိုးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့တာပါ။
သွေးတိုးရောဂါဟာ နှလုံးရပ်ခြင်းနှင့်လေဖြတ်ခြင်း တို့ရဲ့အဓိကတရားခံဖြစ်နေတော့ မဖြစ်ခင်တည်းက ကြိုတင်ကာကွယ်သင့်တဲ့အန္တရာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ နယူးယောက်စီးတီးရှိLenox Hill Hospital မှဒေါက်တာDr. Sunny Intwala ကတော့ အရက်သောက်တယ်ဆိုတာ အဆီတွေကိုမြင့်စေနိုင်တာကြောင့်သွေးတိုး၊ နှလုံးပျက်စီးခြင်း၊လေဖြတ်ခြင်းနဲ့ အဝလွန်ခြင်းတို့ကိုဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့ တခြားသီအိုရီတစ်ခုကိုပြောပြပါတယ်။
ဒီလေ့လာမှုဟာ အမေရိကန်ကျန်းမာရေးနဲ့အာဟာရဆန်းစစ်မှု စစ်တမ်းအရ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကနေ ၁၉၉၄ ခုနှစ်အတွင်း သုတေသနအချက်အလက်တွေကို အခြေခံတာပါ။
“ဒီသုတေသနက ကြီးတဲ့အပြင် လူမျိုးနဲ့လိင်ကွဲပြားမှုအရရော လူအမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။ အကြံပြုချင်တာက နည်းနည်းပဲသောက်သောက်၊ များများပဲသောက်သောက်သွေးပေါင်ချိန်ကို ပုံမှန်စစ်ဆေးပြီး တတ်နိုင်သလောက်သွေးတိုးကာကွယ်ကြဖို့ ပါပဲ။” လို့ ဦးဆောင်သုတေသီ Aladin ကပြောပါတယ်။
Accessed Mar 11, 2019.
ဆေးနဲ့အရက် နီးနီးကပ်ကပ်သောက်မိရင် ဘာဖြစ်တတ်လဲ ။ ။